समाज विशेष – Halkaro
शास्वातधामको नाममा विनोद चौधरीको धन्दा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, उद्योगबाट उत्पादित फोहोर सोझै खोलामा
प्रकाशित मिति : २०७५, १० जेष्ठ बिहीबार
नवलपुर । अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त वाइ वाई चाउचाउ उत्पादन गर्ने चौधरी उद्योग ग्रामले नियम विपरीत भवन निर्माण तथा जग्गा कब्जा गरेको खुलासा भएको छ । देवचुलि नगरपालिका वडा नम्बर दुई दुम्कौलिमा रहेको उक्त चौधरी ग्रामले गरेका कार्यहरु तत्काल सुधार गर्न भन्दै देवचुलि नगरपालिकाको कार्यलयले सिजि ईन्डष्ट्रियल पार्कको नाममा आवस्यक कार्यर्थ शिर्षक नै राखि २०७४ साल […]
लोप हुँदै परम्परागत आरन व्ययवशाय
प्रकाशित मिति : २०७४, २१ आश्विन शनिबार
नवलपरासी । गाउँ घरमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएको आरन व्यवसाय विस्तारै लोप हुन थालेको छ । धेरै मेहेनतमा कम आम्दानी हुन थालेपछि विस्तारै लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो । पुर्खौैंदेखि चल्दै आएको यस व्यवसाय वजारमै तयारी भएका साधन आएपछि यसको महत्व पनि त्यत्तिकै कमि भएको आरन व्यवसायिहरुको गुनासो छ । गाउँ घरमा चलाउदै आएका आँसी, […]
७० वर्षमा एसईई पास गर्ने दुर्गे कामीको याचनाः साउदी जेलमा रहेका छोरालाई फिर्ता ल्याईदेउ
प्रकाशित मिति : २०७४, १५ श्रावण आईतवार August 5, 2017
काठमाडौँ । ७० वर्षको उमेरमा एसईई उत्तीर्ण गरेर चर्चामा आएका स्याङ्जाका दुर्गे कामीले सरकारसँगै साउदीको जेलमा रहेका छोराको उद्दारका लागि याचना गरेका छन् । आईतबार सिंहदरबारमा पुगेर उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री महरालाई कामीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । कामीले आफ्नो छोरा नरेन्द्र सुनार विक, साउदीको जेलमा रहेको जानकारी गराउँदै नेपाल फिर्ता ल्याउने पहल गरिदिन पनि अनुरोध […]
प्रहरीको १०० मा महिलाको व्लफ कलः के भन्छन् त फोन गर्ने महिला ?
चितवन । अत्यावश्यक कामका लागि या कुनै समस्या परेमा फोन गर्नुपर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको १०० नंमा एक चौथाइ ब्लफकल आउने गरेको पाइएको छ ।प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाका अनुसार दैनिक करिब ५०० वटा फोन प्रहरीको १०० नम्बरमा आउँछ । गत एक वर्षमा गरिएको अध्ययनमा आएको फोनमध्ये २३ प्रतिशत ब्लफकल हुने गरेको पाइएको हो । पाँच सेटमार्फत […]
काठमाडौँ । पछिल्लो वर्षमा गैरकानुनी तवरबाट नेपाली नागरिकता लिने भारतीयहरुको संख्या बढ्दै गरेको देखिन्छ । नेपालको राजनितिक अस्थीरता, राष्ट्रियतालाई समेत दलिय स्वार्थको निम्ति बन्धक राख्न पछि नपर्ने राजनितिक दलका नेताहरुको प्रवृति एवं क्रियाकलाप र भ्रष्ट प्रशासनयन्त्रको कारण विहार, उत्तर प्रदेश लगायतका सिमावर्ती भारतीय राज्यहरुबाट लाखौँ लाख भारतीयहरुले गैरकानुनी रुपमा नेपाली नागरिकता लिएका छन् । सिमा […]
मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डः मृत्युको मुखमा यात्रा
प्रकाशित मिति : २०७३, २७ चैत्र आईतवार April 11, 2017
प्रिनिश थापा चितवन÷मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्ड कति धेरै कठिनपूर्ण यात्रा हो, त्यो बाटो भएर हिँड्ने सबै परिचित छन् । कति बेला कहाँ दुर्घटना हुने हो, ड्राइभर र यात्री दुवै उत्तिकै चनाखो भएर हिँड्नुपर्छ । त्यसमाथि सडक विस्तारको कामले सडक धुलैधुलो छ । मुग्लिन–नारायणघाट सडकका विभिन्न पाटा खोतल्ने हामीले प्रयास सुुरु गर्यौँ । हाम्रा पाठकका लागि […]
चार दिनमा भरतपुर कारागारका दुर्इ कैदीको मृत्युः किन गुमाउँछन् कैदीले कारागारमै ज्यान ?
प्रकाशित मिति : २०७३, १३ चैत्र आईतवार March 28, 2017
चितवन । भरतपुर कारागारभित्र वर्षेनी कैदीहरूको दीर्घ रोगका कारण मृत्यु हुँदै अाएको छ । मेडिकल हवको रूपमा परिचित चितवनमा अन्य जिल्लाबाट दीर्घ रोग लागेका कैदीबन्दीहरू स्थानान्तरण भइ अाउने गरेका छन् । पछिल्लो चार दिनमा भरतपुर कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका दुर्इ कैदिको मृत्यु भएको छ । दुबैको मृत्यु क्यान्सर रोगकका कारण भएको कारागारले जनाएको छ । […]
काठमाडौँ । सधैँझैँ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका चार सदस्य कार्यालय समयभित्र कार्यालय प्रवेश गरिसेका थिए । आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ विगत एक महिनादेखि कार्यालय पुगेका छैनन् । आयोगमा आफूले दर्ता गराएका उजुरीबारे बुझ्न पुगेका पीडितहरूलाई प्रहरीले गेटमै रोक्यो । प्रहरीले आयोग प्रवेश गर्न रोकेपछि पीडितहरूले प्रहरी र आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध नाराबाजी गर्न थाले । प्रहरीले सुरक्षाका […]